Celtra yi Iqonga loLawulo lokuyila (CMP) ngokwenza, ukusebenzisana, kunye nokukhulisa intengiso yakho yedijithali. Ubuchule, imithombo yeendaba, ukuthengisa, kunye namaqela earhente anendawo enye yokulinganisa amaphulo kunye nokuyila okunamandla kwezixhobo zehlabathi ukuya kwimidiya yasekhaya. Ngenxa yoko, iimveliso zinokulinciphisa ixesha lokuvelisa kwaye zinciphise kakhulu impazamo.
Linganisa Idatha edibeneyo yokuyila kuwo onke amajelo okuzisa idatha yokusebenza kumaqela okuyila kunye nokubonelela ngedatha yoyilo kumaqela eendaba. Iqonga linomboniso oqhelekileyo kunye neemetrikhi zevidiyo, umakhi wengxelo kunye nokubonwa kwideshibhodi. Kukwakho nokuthumela ngaphandle okanye ukunika ingxelo nge-API yokudibanisa iziphumo zomsebenzi.
tags: uyilo lwentengisointengiso yoyiloCeltracmpyintoni i-cmp